Gormay dhacaysa Doorashadda Barlamaanka Somaliland ? – Radio Daljir
Gormay dhacaysa Doorashadda Barlamaanka Somaliland ?
Janaayo 11, 2019 2:51 g 0
Xisbiyada UCID iyo KULMIYE ayaa ku heshiiyay in doorashooyinka baarlamaanka iyo degaanka la qabto bisha November 2019ka, iyadoo doorashada ay qabanayaan guddida doorashooyinka ee hadda jooga.
Xisbiga Wadani ayaa ka qeyb ka aheyn Xisbiyadda gaaray Heshiiskaan cusub.
Masuuliyiin Jubbaland ka tirsan iyo Xiriirka kubadda cagta oo kulan yeeshay
Sheekh Kenyaawi oo Muxaadaro ku qabbtay muqdisho iyo buuq ka dhashay o